Nzira yejojo ​​HGH - Genotropin HGH mirayiridzo yekuita sei injection
NeHGH Thailand February 07, 2018
Genotropin - chinhu chakasiyana-siyana chekukura kwehomoni muThailand uye kune dzimwe nyika, chakazvisimbisa sehutano hwakanaka uye hwakachengeteka
Nzira yekuzvimiririra sei kuisa hutoni hukura?
Pashure penyu activated ari HGH pen ipai muyero waunoda, unogona kutanga kujova
- bvisa kapi yekudzivirira kubva munhare
- zvinhu zvose zvakagadzirirwa kujowa, mujoyi unoitwa nemaoko akachena uye ganda rinotanga kutorwa newaini
- Basa rekuvhara kukura kwehomoni pasi peganda kusvika kune mafuta (kwete musisi)
Cherechedza! Iwe unogona kushandisa chero nzvimbo panzvimbo yemuviri (mhuka, gumbo, dumbu kana gorofu)
- Zvadaro, unofanirwa kupinda nenyuchi kusvika pakadzika kwemamilimita ane 5, unogona kuita pane imwe nzvimbo yakarurama kana kutsetseka - semufananidzo
- Ndapota musanetseka, tsono yacho yakaonda kwazvo, haina kukuvara zvachose
- Ikoko kungoita bhodhi uye ubatisane kwemashure 5
Ready! Zviri nyore kwazvo nekubatsirwa nemajisi ekukura kwehomoni, uri kuwana muduku uye hutano zuva rimwe nerimwe
Kurisa kukura hormona ikozvino bvanya pano!
Ndinovonga nekuda kwemirayiridzo yakajeka